ORANGE PRO LEAGUE : Mila mitandrina ny Fosa mandritra ny fihaonana amin’ny Ajesaia
Fitsarana mitongilana ataon’ny mpitsara no nampitroatra ny mpitia kitra eto Mahajanga nandritra ny fifaninanana natrehan’ity klioba iray sangany eto Boeny ity. 11 février 2020
Saingy na izany aza dia miakatra hatrany ny laharana misy ny Fosa Fc amin’izao fotoana izao, ka taorian’ny nandresena ny ekipan’ny Seranam-piaramanidina As Adema ny alahady teo tany amin’ny kianjan’i Vontovorona Antananarivo, dia ny ekipan’i Ajesaia avy any amin’ny ligin’i Bongolava indray no hifampitady amin’zy ireo ny alahady ho avy izao ao amin’ny kianjan’i Alexandre Rabemananjara andro fahairaika ambin’ny folo.
Tamin’ny isa 1 noho 0 teo amin’ny fizaràm-potoana faharoa, minitra faha 66 no nampidiran’i Baggio io baolina tokana nitondra ny fandresen’i Fosa ny Adema io raha tsiahivina ny lalao farany teo, ka niakaran’ity ekipa avy eto Mahajanga ity eo amin’ny laharana fahaefatra. Filaharana vonjimaika hatreto, dia ny Cosfa no mitarika manana isa 25, ny Ajesaia isa 23, ny Cnaps sport no fahatelo ary ny Fosa Fc no laharana fahaefatra taorian’ny andro fahafolo teo amin’izay fiadiana ny tompondakan’i Madagasikatra taranja baolina kitra "Orange pro league" izay.
Ny taona 2016 no nijoro teto Mahajanga ny ekipa Fosa junior, ary efa nandrombaka pao-droa ny amboara sy tomponandakan’i Madagasikara tamin’ny taom-pilalaovana teo aloha. Nanao ny tsy ambinina kosa raha nisolo tena ny firenena malagasy tany amin’ireo fifaninanana Afrikanina. Fosa Fc izay mikendry hanonitra ny tandrevaka nisy tamin’ izy ireo teo aloha izay tarihin’Arno Steenkist, filoha mpanorina ny klioba sy Tity Rasoanaivo mpanazatra azy ireo ary Baggio Rakotoarisoa, kapiteny.